बूढीआमैको दसैँ (लघु कथा) – Chitwan Post
बूढीआमैको दसैँ (लघु कथा)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २, २०७६
दसैँको चहलपहल सहरबजारदेखि गाउँबस्ती सबैतिर सुरू भैसकेको थियो । मुड्खुभन्ज्याङ्गका बासिन्दाहरु पनि दसैँको किनमेल, घरको सजावट आदि इत्यादि काममा व्यस्त देखिन्थे । तर, त्यसै गाउँकी एक जना वृद्धा आमालाई भने कत्ति पनि दसैँले छुन सकेको थिएन ।
बूढीआमै दिनमा लौराको सहाराले घरनेरको चौतारीमा पुगेर गाउँको रौनक अनि चहलपहल हेर्दै दिन बिताउँछिन् भने साँझपख मनमा गाँठो पार्दै आफ्नो कुटीमा फर्र्कििन्छन् । छोराछोरीको साथ, श्रीमान्को माया दस वर्षअगाडिका ती रमाइला पलहरु सम्झँदै भक्कानिएर आफ्ना परेलीहरु भिजाउँछिन् । कहिले कोदाको खोले पकाएर खान्छिन् त कहिले भोकै पल्टिन्छिन् ओछ्यानमा ।
उनको जेठो छोरा यूएस अनि अर्को अस्ट्रेलिया बस्छन्, साथै छोरी जापान । सबैजना आआफ्नै परिवारका साथ छन् । त्यही तीनवटा छोराछोरीलाई दुःखजेलो गरी पढाउने र बढाउने गर्दागर्दै उमेरले कतिखेर नेटो काटेछ पत्तै पाइनन् उनले । आठ वर्षअघि एउटा दुर्घटनामा परी श्रीमान्को मृत्यु भएपश्चात् उनी साँच्चै एक्लिएकी थिइन् ।
साँझपख यूएसबाट फोन आयो ।
‘आमै ! झट्टै आउनुस्, छोराको फोन आ’को छ’ भन्दै पल्लाघरे साइँला चिच्यायो । धेरै दिनपछि जेठो छोराको फोन । वूढीआमै खुसी हुँदै लौराको सहाराले फोन भएतिर लम्किइन् ।
‘हेल्लो बाबु ! सन्चै छौ तिमीहरु ? बुहारी, नातिनातिनाहरु सन्चै होलान् नि ?’
‘हामी सबैजना आरामै छौँ आमा । अनि तपाईंलाई कस्तो छ नि ?’
‘म पनि अहिलेसम्म त राम्रै छु बाबु । पकायो, खायो अरु काम नैं के छ र बाबै म बूढीको ? तिमीहरु चाहिँ आफ्नो राम्रो ख्याल गर । दसैँ पनि आयो, कहिले आउँछौ त घर ?’
‘आमा, हामी सबैजना दसैँको बिदा पारेर कतै घुम्न जाने भएका छौँ । त्यसैले, यो दसैँमा हाम्रो बाटो नहेर्नुहोला । तपाईं राम्रोसँग दसैँ मनाउनू । मिल्यो भने अर्को साल आउने प्रयास गरौँला सबै परिवार’ खुसीको भावमा जेठो छोराले खबर सुनायो ।
छोरा त खुशी थियो, तर आमाको मन न हो । छोराबुहारी, नातिनातिनासँग यो साल पनि दसैँमा भेट नहुने भो भन्ने कुराले ती आमैका आँखाका डिलहरुबाट आँसु छचल्किए । उनले आँसु थाम्नै सकिनन्, अनि छोराले थाहा पाउला कि भन्ने सोची फोन राखिदिइन् ।
छोराले फेरि फोन ग¥यो ।
‘फोन काटियो नि आमा !’
‘त्यै त नि बाबु, आफैँ काटियो ।’
‘आमा, यो सालको दसैँमा भाइ पनि आउन पाउँदैन रे । हिजोमात्रै उसको र मेरो कुरा भाथ्यो । तपाईंले राम्रोसँग दसैँ मनाउनू । मिल्यो भने अर्को साल सबैजना आउनेछौँ ।’
‘ल..ल.. तिमीहरु मेरो चिन्ता नगर । तिमीहरुको खुसी नैं मेरो खुसी हो । जता गए पनि बाबुनानीको राम्रो ख्याल राख्नू’, यति भन्दै गर्दा बूढीआमै नराम्रोसँग भक्कानिन् । छोराले आमा रोएको थाहा पाएन या थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझैँ ग¥यो, कुन्नि !
‘हुन्छ आमा, अहिले म फोन राखिदिन्छु ।’
मजेत्रोको फेरोले आँसु पुछ्दै खिन्न मन बनाएर ती आमै घर फर्किइन् र अँगेनाको छेउमा टुसुक्क बस्दै मनमा कुरा खेलाउन थालिन् ।
‘लोग्ने हुँदा पो जहाँ पुगे पनि चाडबाडमा टुप्लुक्कै घर आउँथे । थुक्क मेरो फुटेको भाग्य ! छोराछोरी सबै विदेश । मलाई सम्झिएर किन पो फर्किन्थे र ! तिमीलाई पनि अघि लगाएँ । अभागिनी, पापिनी म । दिन काटे रात काट्न गाह्रो, रात काटे दिन काट्न गाह्रो । कसरी बिताऊँ यो एक्लो जीवन ? तिमी त भाग्यमानी रहेछौ बूढा । म त जोगीझैँ कुटीमा काल पर्खेर बसेकी छु । छोराछोरी पनि बिहे गरेपछि पराई भैगए । एक्लै बसेको पनि आठ वर्षजति भयो । अब सक्दिनँ । यो दसैँ काट्न नपरोस् । मलाई पनि लैजाऊ न बूढा !’
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘सान्नानी’ कथामा प्रजातीय अध्ययन
स्पिकिङ च्याम्पको सकियो प्रशिक्षण
भानु जयन्तीमा रामायण पाठ तथा साहित्य गोष्ठी
कुमाताको दोस्रो संस्करण बजारमा